हिमाल खबरपत्रिका | टीकापुर घटनाको अर्को पाटो जानाजान थुनिन्छन् निर्दोष
टीकापुर घटनाको अर्को पाटो जानाजान थुनिन्छन् निर्दोष
हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र निर्दोष व्यत्तिाmलाई जानाजान थुनामा पठाउने काम पनि हुने गरेको तथ्य उजागर भएको छ, आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको बीभत्स हत्या भएको टीकापुर घटनाको न्यायिक निरुपणको क्रममा। नगरेको अपराधमा तीन वर्ष जेल बसेर छुटेका कैलालीका विसराम चौधरी, रामनरेश चौधरी र नुरुल अलि जागाले खेपेको भुत्तमान।
२०७२ सालसम्म सरकारको नजरमा विसराम चौधरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै उत्कृष्ट किसान थिए । कृषिमा उनको सफलताका कथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाकिन्थे । प्रकाशित–प्रसारित उत्प्रेरक कथाहरूमा उनलाई ‘कृषि क्रान्तिका अभियन्ता’ भनिएको हुन्थ्यो । देशदेशावरमा हुने प्रशिक्षणहरूमा उनलाई स्रोत–व्यक्ति बनाइन्थ्यो । कृषिमा वार्षिक रु.५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने विसरामको सिद्धार्थ केरा बाली विकास कृषक समूहलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभागको कृषि प्रसार निर्देशनालयले २०६६ सालमा ‘सुदूरपश्चिमबाट उत्कृष्ट भएको’ भनेर रु.५ हजार पुरस्कार दिएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि २०६९ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र कृषि विकास बैंकले संयुक्त रूपमा ‘देशमा कसरी आधुनिक कृषि प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ?’ भनेर अध्ययन गर्न २२ जनाको उच्चस्तरीय टोली बनाए । यो टोली एक महीनाको अध्ययन भ्रमणमा इजरायल समेत गयो । विसराम टोलीका एक सदस्य थिए ।
समयको पासा पल्टियो । २३ चैत २०७२ को बिहान ११ बजे नर्सरीको ब्याडमा काम गरिरहेका बेला विसराम पक्राउ परे । पक्राउ पुर्जीमा ‘चोरी, लुटपाट, ज्यान मार्ने उद्योग र हत्या अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपरेको’ उल्लेख थियो । प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि उनले पक्राउको वास्तविक कारण थाहा पाए । घरभन्दा करीब ८ किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा पर्ने टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा भएको घटनामा संलग्न भएको भनेर उनलाई समातिएको रहेछ, जहाँ ८ सुरक्षाकर्मी सहित एक नाबालकको हत्या भएको थियो ।
पक्राउ परेका विसरामले ७ भदौमा आफू घरबाहिर कतै नगएको बताए । प्रहरीले उनको कुरा सुनेन । अभियोग दर्ता भयो, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । तीन वर्ष जेल बसेर निस्किएका विसरामले १५ चैत २०७५ मा आफ्नै घरमा घटनाको बेलिबिस्तार लगाउँदै भने, “त्यस दिन म दिनभर नर्सरीमा काम गरेर बसेको थिएँ, कहाँ आन्दोलनमा जानू !” हिरासतमा आफूले प्रहरीलाई गरेको अनुरोध स्मरण गर्दै उनले भने “तपाईंहरूले मेरा छिमेकीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू साक्षी छन् भनें तर मरिगए सुनेनन् ।”
उनलाई तीन वर्षसम्म धनगढीस्थित जिल्ला कारागारमा राखियो । कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा प्रहरीको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भनेर विसरामलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो । उनी रिहा भए ।
तस्वीरहरुः जेवी पुन मगर
बिहानको ७ बजेको थियो । विद्यालय हाताभित्र छिरेका दुई जना व्यक्ति एकछिन पियनसँग खासखुस गरेपछि सोझै रामनरेशले पढाइरहेको कोठामा पुगे । तीन वर्ष पुरानो घटना सम्झ्ँदै रामनरेश भन्छन्, “तीमध्ये एकले हामी ‘प्राक्टिस बूक’ बेच्न आएका हौं, तपाईंसँग कुरा गर्नु छ बाहिर आउनोस् भन्यो । मैले हामीलाई अहिले ‘प्राक्टिस बूक चाहिंदैन’ भनें । लगभग धम्क्याएको लवजमा तिनले बाहिर आउनोस् भन्दै विद्यालय हाता बाहिर लगे र ‘तपाईंलाई पक्राउ गरिएको छ’ भनेर बाइकको बीचमा राखेर दौडाए ।”
राजापुरदेखि धनगढीसम्मको करीब १०० किलोमिटर यात्रा रामनरेशको दिमागमा कहिल्यै नबिर्सने गरी बसेको छ । तीन वर्षपछि १८ चैत २०७५ मा टीकापुर नगरपालिकाको नुक्लिपुरस्थित घरमै भेटिएका रामनरेशले त्यो घटना सम्झ्ँदै भने, “७ भदौमा सुरक्षाकर्मीमाथि भालाले आक्रमण गर्ने तँ हैनस् भनेर गाडीभित्रै कुटे । म त्यो दिन स्कूलमा पढाइरहेको थिएँ भनें, उनीहरूले साप्रा र ढाडमा हेल्मेटै हेल्मेटले हाने । सुख्खड प्रहरी चौकीमा रक्सीले मातेका प्रहरीहरू आउँदै पालैपालो बुट र लट्ठीले चुटे । अहिले त्यो सपना झैं लाग्छ ।”
थारूवान/थरूहट संघर्ष समितिले हरेक गाउँका भलमन्सा (थारू समुदायमा न्याय सम्पादन गर्ने हैसियत भएको व्यक्ति) लाई ‘एक घर एक व्यक्ति’ आन्दोलनमा सरिक हुन उर्दी जारी गर्न लगाएको थियो । ७ भदौमा स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको टीकापुर बजारमा गएर सरकारी कार्यालयहरूमा ‘थारूवान/थरूहट स्वायत्त राज्य’ लेख्ने घोषित कार्यक्रम थियो । भलमन्सा चन्द्रलाल डगौराले पनि गाउँलेलाई ‘आन्दोलनमा जाने’ निर्णय सुनाएका थिए । तर, गाउँमै विवाद चर्किएपछि सबैजना ‘पंचायत’ मै व्यस्त थिए ।
तर, कैलाली जिल्ला अदालतले जागालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । हत्या सहित तीन वटा संगीन अपराधको अभियोगमा जागाले ३ वर्ष ६ महीना जेलमा बिताए । जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा निर्दोष ठहर गरेपछि उनी रिहा भए ।
“यी कुनै मान्छेलाई म चिन्दिनँ” रामनरेश भन्छन्, “कारागारमा पुगेर मात्रै देखेको हुँ ।” प्रहरीले कसरी यस्तो बयान बनायो ? रामनरेश भन्छन्, “त्यसदिन जिप्रकामा मैले दिएको बयान एक जना प्रहरी अधिकृतले सारिरहेका थिए । उनले मलाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्न भने । मैले सही गर्नुअघि एकचोटि पढ्न पाए हुन्थ्यो भनें । मैले त्यति भन्नासाथ उनले अगाडि रहेको प्लाष्टिकको कुर्सी मेरो टाउकोमा बजारे ।” २१ भदौ २०७२ को त्यो दिन सम्झ्ँदै रामनरेश भन्छन्, “गर्ने बेला के के गर्छस्, अहिले आएर हेर्न माग्ने भनेर पिट्दै आफूले लेखेको बयानमा हस्ताक्षर गराए ।”
जसरी अपरिचित श्रवण चौधरी र प्रदीप चौधरी (१८) सँग मिलेर ‘प्रहरीमाथि सांघातिक हमला गरेको’ रामनरेशको बयान तयार पारिएको छ, त्यसैगरी श्रवण र प्रदीपको बयानमा अदालतबाट सफाइ पाएका अर्का अभियुक्त ‘विसराम हामीसँगै घटनामा संलग्न थिए’ भन्ने समेत उल्लेख छ । “म एक्लो मान्छे, केराबाली छाडेर अन्त जान फुर्सदै हुन्न । घटनाबारे सोही दिन साँझ् टेलिभिजनमा समाचार सुनेर थाहा पाएको हुँ” अदालतमा दिएको बयानमा विसराम भन्छन्, “श्रवण चौधरी र प्रदीप चौधरीले मेरो समेत संलग्नता रहेको भनेर किन बयान दिए थाहा भएन । उनीहरूलाई म चिन्दिनँ ।”
८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा प्रमुख साक्षी बनाइएका चिलम चौराहा नजिक रहेको मोति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने करन चौधरीलाई प्रहरीले समातिएका मान्छेलाई ‘घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए’ भन्ने पुष्टि गर्न प्रयोग गरेको देखिन्छ । ‘रमिता हेर्न गएका’ बालकलाई प्रहरीले तयार गरेको अभियुक्तहरूको लामो सूची घोक्न लगाइएको र तिनको पहिचान गर्न लगाएको खुलेको छ । (हे.बक्स)
बर्बादीपछि निर्दोष ! विसराम, रामनरेश र जागालाई कैलाली जिल्ला अदालतले तीन वर्षपछि निर्दोष ठहर त गर्‍यो तर त्यतिञ्जेलसम्म उनीहरूको जीवनमा नहुनुपर्ने धेरैथोक भइसकेको थियो । जेलबाट छुटेर विसराम घर पुग्दा श्रीमती, ६ वर्षीया छोरी अनि आफन्तले स्वागत गरे । तर, २० बिघा जमीनमा लगाइएको नर्सरी, नगदेबाली र दुःखसुख चलाएको एग्रोभेट लथालिङ्ग भएको थियो ।
श्रीमतीले भोग्नु हैरानी भोगिन् । एग्रोभेटमा दिनभर बस्दा खेतमा लगाइएका केरा चोरी भए । नर्सरीका बोटबिरुवा कसैले उखेलेर लगे, कति काटेर नष्ट गरिदिए । विसराम जेलमा छँदै उनको गाउँ, नारायणपुर–६ बाट टीकापुर नगरपालिकामा उक्लियो । तीन वर्षपछि घर फर्कंदा उनको आर्थिक अवस्था भने तहसनहस भइसकेको थियो । ऋण लिएर गरिएको व्यवसाय टाट पल्टियो । “४७ लाख रुपैयाँ ऋण छ, कृषि विकास बैंकको ब्याज मात्रै १५ लाख पुगेको छ” लामो सास तान्दै विसरामले भने, “इण्डिया र नेपालका साहूबाट ल्याएको सामानको तिर्न बाँकी पैसाको त हिसाब नै छैन ।”
दुई वटा विद्यालयमा पढाएर पाँच जनाको परिवार पालेका रामनरेशको बस्ने सानो झुपडी थियो । तर, उनी जेल गएपछि गर्जो टार्ने एक बिघा जमीन जोत्ने कोही भएन । श्रीमान् जेल परेपछि एक छोरा, बाबा र बाजे सहितको परिवार पाल्न श्रीमतीले ढुंगा बोक्नेदेखि खेती मजदूरीसम्मको काम गरिन् । ती कामका भरमा आठ वर्षको छोरा, नब्बे वर्षका बूढाससुरा र ५५ वर्षीय ससुराको पालनपोषण गर्नु सजिलो थिएन । सबभन्दा नराम्रो कुरा, बच्चाको पढाइ बिग्रियो ।
३ वर्ष ६ महीना ८ दिनपछि निर्दोष ठहर भएर घर फर्केका रामनरेश श्रीमती र बालबच्चाको अवस्था देख्दा रुन मात्र सकेनन् । भर्खरै उनले बर्दिया राजापुर बुधियानाको नेपाल राष्ट्रिय माविमा करारमा नियुक्ति पाएका छन् । “डामाडोल भएको आर्थिक अवस्था त केही वर्षमा उकासिएला” उनले भने, “तर राज्यले निधारमा लगाइदिएको ‘हत्यारा ट्याग’ मेटिन कति वर्ष पो लाग्ने हो !” विसराम र रामनरेश भन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका जागा जेल परेपछि परिवारको झन बिजोग भयो । पाँच भाइको संयुक्त परिवारमा बसिरहेकोले श्रीमती र तीन बच्चाको पालनपोषणमा दाजुभाइले सघाए । तर, पैसाको अभावमा उनका बच्चाले पढ्न पाएनन् । “म जेल परेपछि दाजुहरूले जसोतसो खान–बस्न त दिए, तर बच्चाहरूको स्कूल छुट्यो” जागा भन्छन्, “ढिलै भए पनि अदालतले न्याय दियो । अब सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाए बच्चा पढाउन हुन्थ्यो ।”
प्रहरीले जबर्जस्ती अभियुक्त बनाउने, अनेक भुक्तमान व्यहोरिसकेपछि भने अदालतबाट निर्दोष ठहरिने यो अवस्थाले फौजदारी न्याय प्रणालीकै बिजोग देखाउँदैन ? “घटनाको तात्कालिक अवस्था, संकलित प्रमाण–बयान र पक्राउ परेका व्यक्तिले दिने बयानका आधारमा मुद्दा अदालत जान्छ”, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी विश्वराज पोखरेल भन्छन्, “साबिती बयान दिएका अभियुक्तले अदालतमा बयान फेर्छन्, तीन वर्षसम्म सजाय हुने कसूरमा पुर्पक्षमा गएका व्यक्तिले एक वर्ष सजाय काटिसकेको अवस्थामा पनि अदालतले छाडिदिन्छ । सामान्यतः पुर्पक्षमा गएकाले कमै मात्र सफाइ पाउँछन् । कुनै मुद्दामा पुर्पक्षमा गएका पाँच जनामध्ये दुई जनाले सफाइ पाए पनि तीन जनाको अभियोग ठहर भएकै हुन्छ ।”
टीकापुरबाट करीब २५ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको भजनी बजारमा मेडिकल पसल चलाइरहेका प्रेमबहादुर चौधरी (स्थानीयले उनलाई डाक्टर भन्छन्) लाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । भएको के थियो भने, प्रेमबहादुरको बाख्रो बिरामी भएपछि गाउँले मिलेर काटेर खाएका थिए । तर प्रहरीले टीकापुर घटनामा प्रहरी मारिएको खुशीमा खसी काटेर खाएको भनेर उनलाई पक्राउ गर्‍यो । ७ भदौमा प्रेमबहादुरको मेडिकलमा आफ्नो छोरा गोकर्णलाई उपचार गराउन आएकी स्थानीय बतसिया डगौरा भन्छिन्, “त्यस दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म ‘डाक्टर’ यहीं थिए ।” प्रहरी हिरासतको यातनाले प्रेमबहादुरको कानको जाली फुटेको छ । थारू आन्दोलनले विद्यालय बन्द भएकोले घटनाका दिन थापापुर (हाल खैराहा) स्थित त्रिपुरासुन्दरी निमाविका शिक्षक सन्तराम चौधरी आफ्नो पसलमै थिए ।
टीकापुरको गणेशबाबा सेकेण्डरी स्कूलमा कक्षा ६ मा आवासीय शिक्षा लिइरहेका छोरा प्रभात चौधरीले फोन गरेर ‘स्कूल बन्द भएकोले लिन आउन’ भनेपछि सन्तरामले साथी किसनलालसँग मोटरसाइकल मागे । पन्चर भएको मोटरसाइकल बनाएर टीकापुर जान हिंडेका उनी मानिसको हूल देखेपछि बीच बाटोबाटै फर्किए । “त्यसपछि दिनभर उनी पसलमै थिए, म यहीं छु” खैराहाकै हरिराम आचार्य (५०) भन्छन्, “नभएको आरोपमा फँसाएपछि म आफैं धनगढी पुगेर यथार्थ बताइदिएको थिएँ, तर मेरो कुरा सुनिएन ।” सन्तराम भन्छन्, “नगरेको दोष हाम्रो टाउकोमा थोपरियो । अहिले पनि घरमै नजरबन्द जस्तो जीवन बिताउनुपरेको छ ।” कारागार सजाय भोगेर फर्किएकोले विद्यालयमा पुनः काम गर्न दिइँदा विद्यालयमाथि सरकारको कुदृष्टि पर्न सक्ने भन्दै उनलाई विद्यालयमा समेत फर्कन दिइएको छैन ।